Adeegga - Zhuoer Chemical Co., Ltd.
Adeeggu waa mid ka mid ah faa'iidooyinkayaga ugu xooggan, oo lagu muujiyey diirad saarid macaashka macaamiisheena marka la samaynayo dhammaan go'aannada. Ujeeddadayada ugu weyni waa inaan siino macaamiisheena qanacsanaanta ugu badan. Qaar ka mid ah wada -tashiyadeenna si aan taas u gaarno waa:
● Isku -dubaridka macmiilka/OEM
Iyada oo leh karti wax -soo -saar oo xoog leh iyo waayo -aragnimo wax -soo -saar sannado, waxaan awoodnaa inaan gaarno jawaab -celin deg -deg ah oo R&D loogu beddelayo wax -soo -saarka tijaabada ka dibna wax -soo -saarka ballaaran. Waxaan qaadan karnaa dhammaan noocyada kheyraadka si aan u siino adeegyo wax -soo -saar caadiya iyo OEM noocyo badan oo kiimikooyin ganaax ah.
● Samaynta hababka ansixinta hore, tusaale ahaan, iyadoon loo eegin masaafada ay u jiraan shabakadeena, si loo qiimeeyo loona xaqiijiyo wax soo saarkooda iyo tas-hiilaadkooda tayada.
● Qiimayn taxaddar leh ee baahida caadiga ah ee macaamiisha ama codsiyada gaarka ah iyada oo la eegayo bixinta xal wax ku ool ah.
● Maareynta wax kasta oo sheegasho ah oo ka imanaya macaamiisheenna si habboon si loo hubiyo dhibka ugu yar.
● Bixinta liisaska sicirka qiimaha joogtada ah ee alaabteena ugu weyn.
● Si dhakhso leh ugu gudbinta macluumaadka ku saabsan rabitaannada suuqa ee aan caadiga ahayn ama lama filaanka ah macaamiisheenna.
Si dhakhso ah u socodsiinta nidaamka iyo nidaamyada xafiiska ee horumarsan, sida caadiga ah waxay keentaa gudbinta xaqiijinta amarka, qaansheegyada proforma iyo faahfaahinta dhoofinta waqti gaaban gudahood.
● Taageero buuxda oo ku saabsan dardargelinta oggolaanshaha degdegga ah ee gudbinta nuqullada dukumiintiyada saxda ah ee looga baahan yahay emayl ama telex. Kuwaas waxaa ka mid ah sii -deynta degdegga ah
● Ka caawinta macaamiisheena sidii ay ula kulmi lahaayeen saadaashooda, gaar ahaan jadwalka saxda ah haddii dhalmada.
Sii macmiilka adeeg qiimo lagu daray iyo waayo-aragnimo qaali ah oo qaali ah
● Wax -ka -qabasho wanaagsan oo leh jawaab -celin waqtigeeda leh baahiyaha iyo soo -jeedinta macaamiisha.
● Haysashada awoodaha wax soo saarka xirfadeed, kartida wax soo saar wanaagsan iyo kooxda suuqgeynta firfircoon.
● Alaabooyinkayagu si fiican bay ugu iibiyaan suuqyada Yurub, waxayna ku guuleysteen sumcad wanaagsan iyo caan -qaad sare.
● Bixi muunado lacag la'aan ah.